Somaliland: Qodob lagu sheegay in doorashada Soomaaliya ee 2016-ka laga qabanayo Dhulka Somaliland iyo Jawaabta Wasiirka arrimaha dibeddu ka bixiyey
Home Somali News Somaliland: Qodob lagu sheegay in doorashada Soomaaliya ee 2016-ka laga qabanayo Dhulka...
Somaliland: Qodob lagu sheegay in doorashada Soomaaliya ee 2016-ka laga qabanayo Dhulka Somaliland iyo Jawaabta Wasiir Biix
“Doorashada Somaliland waxay dhacaysaa 2017-ka, mana jiro wax xidhiidh ah oo ka dhexeeya doorashooyinka Somaliland iyo Soomaaliya. Sidaa awgeedna, Beesha Caalamku…” Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland Maxamed Biixi Yoonis – Waraysi
Xukuumadda Somaliland, ayaa jawaab ka bixisay mid ka mid ah qodobbo laga soo saaray Shirka Wada-tashiga Qaran ee dawladda Federaalka Soomaaliya, Maamul-goboleedyada hoos-taga iyo xubno Beesha caalamka ka socday muddo laba maalmood ah ku lahaayeen magaalada Muqdisho, kaasoo shalay la soo gebo-gabeeyey.
Shirkaas Muqdisho lagu soo gebo-gabeeyey shalay oo si weyn loogaga hadlayey qaddiyadda qaabka ay doorasho uga dhici karto dalka Soomaaliya sannadka soo socda ee 2016-ka, waxaana qodobbada War-Murtiyeedka laga soo saaray mid ka mid ah lagu xusay inay doorashadaasi oo noqonaysa mid dadban oo aan ahayn hal qof iyo hal cod laga qabto guud ahaan dalka Soomaaliya iyo Somaliland.
Hase-yeeshee, Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland Maxamed Biixi Yoonis oo Wargeyska Himilo xalay Khadka Taleefanka wax kaga weydiiyey sida ay qodobkaas Somaliland u aragto, ayaa ku dooday inuu yahay suuragalnimada ka fog, isla markaana wax ka hirgelayaa aanu jirin.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa), ayaa gunaanadkii shirka Muqdisho ka socday labada cisho ka Akhriyay War-murtiyeedka kasoo baxay shirka, kaasoo 10 qodob ka koobannaa ayay ugu muhiimsanaayeen hannaanka geeddi-socodka doorashooyinka 2016-ka iyo habka loo marayo.
“Xubnaha Shirkan ka qayb-galay, ayaa isku waafaqay hab-raaca hawl-fulineed oo tilmaamaya habka uu wada-tashigu u dhacayo iyo soo jeedinnada loo maareynayo habka ay u dhacayaan doorashooyinka dalka Soomaaliya sannadka 2016-ka.
Maaddaama dalka Soomaaliya aanay ka dhici karin doorasho Qof iyo Cod ahi, ayay Ergadu isku raaceen in la qaban karo doorasho dadban, taasoo aan ahayn doorasho qof iyo cod ah. Waxaa kale oo Ergadu ay isku raaceen in loo baahan yahay in wada-tashi dheeri ah lagala yeesho doorashada sida dhalinyarada, haweenka, odayaasha dhaqanka, culummada, aqoon-yahannada, ganacsatada iyo dadka laga tirada badan yahay.
Sidoo kale, kulammada wada-tashiga ah, ayaa la isku raacay inay ka dhacaan deegaannada Maamul-goboleedyada, iyadoo lasoo jeediyay inay ka qayb-galaan beelaha kasoo jeeda Somaliland iyo qurba-joogta Soomaaliyeed, si loo xaqiijiyo in la maqlo codka Soomaalida qurbaha ku nool.” Sidaa ayaa lagu yidhi Nuxur-ka War-murtiyeedka laga soo saaray shirka labada cisho ka socday Muqdisho.
Balse-, Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland Maxamed Biixi Yoonis oo xalay Khadka Taleefanka Wargeyska Himilo kula xidhiidhay, waxna ka weydiiyey Qodobkaas ka soo baxay shirka Soomaaliya iyo sida uu Somaliland u saamayn karo, ayaa sheegay inaanay waxa shirkaas ka soo baxay ahayn wax u yaalla Somaliland, maaddaama oo ay Somaliland tahay dal ka madax-bannaan Soomaaliya oo 25 jirsaday, Beesha caalamkuna ay la socoto halka ay kala marayaan Somaliland iyo Soomaaliya.
“Warka ka soo baxay halkaasi (Muqdisho) wax ka jiraa ma jiraan, Somaliland-na waa dal madax-bannaan oo muddo 25 sannadood ah ka maqnayd oo aan shaqo ku lahayn dalkaasi Soomaaliya, labada waddan ee Somaliland iyo Soomaaliyana waxa u socda wadahadallo ku salaysan sidii ay u kala tagi lahaayeen.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland.
Wasiir Maxamed Biixi Yoonis oo sii watay jawaabta uu su’aashaas ka bixiyey, waxa uu intaas ku daray oo yidhi;
“Markaa, doorashada Somaliland waxay dhacaysaa 2017-ka, mana jiro wax xidhiidh ah oo ka dhexeeya doorashooyinka Somaliland iyo Soomaaliya. Sidaa awgeedna, Beesha Caalamku way ogsoon tahay in Somaliland ka madax-bannaan tahay dalka Soomaaliya.”